Okwu mmalite na uru nke sofa eletrik – Baotian Ngwongwo Co., Ltd.
The electric sand chair has different buttons. Bọtịnụ elu na ala dị na bọtịnụ nwere ike ijikwa elu na ala azụ sofa. Site na ngbanwe nke sofa eletrik, ọnọdụ onye nọ na kwushin ga -agbanwekwa, dị ka azụ azụ. Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ ga -emegharị hips ha azụ, na ntụgharị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ụdị onye a, pls kpọtụrụ anyị- a sofa bed manufacturer.
Ndị "anwansi" nke oche sofa eletriki bụ mgbe ị nọ ọdụ, azụ dị n'elu, and there is no need to add a footstool in the front, na ụkwụ nwere ike ịda n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ tinye ya na ebe a na -azọ ụkwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ a footrest, ị nwere ike iji bọtịnụ njikwa ebuli ebumpụta ụwa. Ọ bụ ezie na usoro a dị mgbagwoju anya karịa oche ọdịnala, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ọkwa ya dị elu.
Uru nke sofa eletriki:
1. Sofa eletrik nwere mmetụta nke ibelata nrụgide. Oche sofa dị nro na nrụgide n'ahụ mmadụ dị obere, yabụ ọ ga -aka mma ịnọdụ ala n'oche sofa;
2. Sofa eletrik nwere ọrụ ịhịa aka n'ahụ. When a person sits on the contemporary corner sofa and does a little activity, ọ ga -ebute obere ịma jijiji nke isi mmiri na ihe dị nro. Ahụ mmadụ na -edo onwe ya n'okpuru ike mgbanwe nke mgbanwe oge, nke nwere ike rụọ ọrụ ịhịa aka n'ahụ.
3. Sofa eletrik na -agbanwe agbanwe. A na -eji ihe dị nro dị ka linen mee kwushin nke sofa, aja aja, ogbo, wdg. Enwere ọtụtụ isi mmiri n'okpuru, nke dị nro ma na -agbanwe.
Mkpado: Zụrụ sofa setịpụrụ, sofa eletriki
Oge ezipụ: 2020-08-01